Iprothesis kwigrama yesiNgesi
Iprothesis (Izandi zeZandi)
Iprothesis iyigama elisetyenziswe kwiifowuni kunye nefowuni ukubhekisela kwongezwa kwesilayidi okanye isandi (ngokuqhelekileyo isibonakaliso ) ekuqaleni kwegama (umzekelo, ekhethekileyo ). I-Adjective: prothetic . Kwakhona kuthiwa i- intrusion okanye i -epenthesis yegama-yokuqala .
U-Linguist uDavid Crystal uthi inqaku leprothesis "liqhelekileyo kwiinguqu zembali .... kunye nenkulumo edibeneyo "( I-Dictionary yeeLwimi kunye neFonetics , 1997).
Okuchasene neprothesis yi- aphesis (okanye i- aphaeresis okanye i- procope ) - oko kukuthi, ukulahlekelwa kwesigodlo esincinci (okanye isilabhadi ) esingaqhelekanga ekuqaleni kwegama.
Ukufakwa kwesandi esongezelelweyo ekupheleni kwegama (umzekelo, ngelixa i- st ) libizwa ngokuba yi- epithesis okanye i- paragogon . Ukufakwa kwesandi phakathi kweinconci ezimbini phakathi kwegama (umzekelo, gcwalisa u m yefilimu ) kuthiwa yi- anaptyxis okanye, ngokubanzi, i- epenthesis .
"Kwaye kunzima, kwaye kunzima, kunzima, kunzima,
Kwaye kuya kuwela imvula enzima. "
(Bob Dylan, "I-Gonna Fall A-Gonna Fall." I-Freewheelin 'uBob Dylan , ngo-1962)
"Abalingani bam baya kuhamba ngokuloba, kwaye baya kufunda Intsimi kunye nomlambo. Abanye babo, mhlawumbi bonke, baya kuba yintlanzi."
(EB Mhlophe kwileta eya kumhleli waseNew Yorker oguqule igama elitsha ukuhlaziywa kwenye yeengcoko zakhe)
"[Isandi seprothetic sisilwimi esinjalo] esiye saqulunqa ngokusemthethweni ekuqaleni kwegama." Umzekelo, u- e ukuseka usuvela kwimvelaphi yeprothetic kwi-Old French establishlis , ukusuka kwisiLatini. "
(PH Matthews, Oxford Concise Dictionary yeeLwimi , i-2nd ed. I-Oxford University Press, 2007)
"Amehlo amadala amakhulu, khawulilele le nto."
(ULear King in The Crisis of King Lear , nguWilliam Shakespeare)
IsiNgesi esiqhelekileyo (SE)
Umzobo (umdlalo wegama)
Imfazwe Yehlabathi II: Douglas SBD Dauntless
Ukususwa kunye noVocation
Dibana noHera, u-Queen of the Greeks
IsiNgesi Ukufundisa izifinyezo ezichazwe
Indlela yokubala izidingo zakho zokugcina ukutya
Indlela Yokubala Ukunyaniseka - Umzekelo Osebenzayo Ingxaki